Huteel kuyaala magaalada Nairobi oo weerar lagu qaaday - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeEast AfricaHuteel kuyaala magaalada Nairobi oo weerar lagu qaaday
January 15, 2019 Puntland Mirror East Africa, World 0
Nairobi-(Puntland Mirror) Huteel kuyaala caasimada dalka Kenya ee Nairobi ayaa weerar lagu qaaday galabta oo Talaado ah.
Ugu yaraan labo qarax iyo rasaas ayaa laga maqlay xarun kutaala degmada Westland ee magaalada Nairobi, halkaas oo uu kuyaalo huteelka DusitD2 iyo sidoo kale xafiisyo.
Dad badan oo dhiig korkooda ka qubanayo ayaa laga soo saaray xarunta.
Afar nin oo hubeysan ayaa xarunta gashay, sida ay sheegeen goobjoogayaal.
Haweenay ka shaqeynaysay xarun u dhow dhismaha ayaa wakaalada wararka Reuters u sheegtay: “Waxaan maqlay xabado, kadibna waxaan arkayay dad cararaya oo gacmaha kor u taagaya iyo qaar galaya banki ay ku dhuumanayaan oo ay naftooda ku badbaadinayaan.”
Qiiq ayaa la arkayay kasoo baxaya xarunta, iyo baabuur ay dab qabsadeen yaalay goobta.
Sargaal katirsan ciidamada booliiska ayaa BBC-da u sheegay in xaaladu aysan fiicnayn ayna dadku geeriyoonayaan.
Ma jirto faahfaahin ku saabsan khasaaraha ka dhashay ilaa iyo hadda.
Huteelka la weeraray oo ah five-star ayaa leh 101 qol.
“Anagaa ka dambayna weerarka Nairobi. Howlgalku waa uu socdaa,” Cabdicasiis Abu Muscab, afhayeenka howlgalada Al-Shabaab, ayaa sidaa u sheegay Reuters.